Dhalinyarada Xudur oo lala yeeshay wadatashiga doorashada qof iyo cod 2020 – GMDQ
Dhalinyarada Xudur oo lala yeeshay wadatashiga doorashada qof iyo cod 2020
Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka ayaa 18-12-2017 waxay ka fureen shir wada tashi magaalada Xudur ee Gobolka Bakool, waxay na kula kulmeen dhalinyarada degaanka ku sugan. Shirka wadatashiga ujeedadiisa waxay ahayd falanqeynta geedi socodka Doorashada qof iyo cod ee 2020, Dhalinyada waxaa hadalo dhiirigelin ah u jeedisey Gudoomiyaha Guddiga Xaliimo Ismacil, waxayna u sheegtey muhiimada uu doorashada u leedahay qofka Muwaadinka ah, iyo Faaiidooyinka uu muwaadinka Soomaliyeed ka helaayo mustaqbalka, sidoo kale waxay ka hadashey taariikhda ay soo martey doorashooyinka Soomaaliya. Sidoo kale Gudoomiye Xaliimo ayaa u sharaxdey dhalinyarada dastuurka Soomaaliya waxyaabaha uu ka qabo Doorashooyinka. Gudoomiye ku xigeenka Degmada Xudur Cabdulaahi Maxamed Nur Isak ayaa sheegay in ay u tahay guul u soo hoyatey imaatinka Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka ay Yimaadeen Magaalada Xudur, wuxuuna sheegay inay u baahan yihiin nidaamka doorashada qof iyo cod, taasoo uu ku tilmaamey inay tahay mida keliya ay ku soo dooran karaan cidey u arkaan in maslaxada dalka uu ku wanaagsan yahay. Sidoo kale waxaa ka Hadley shirka wadatashiga kusimaha Gudoomiyaha Gobolka Xudur Aadan Cabdi Isaaq, wuxuu weydiiyey suaal ku aadan dadka Naafada ah sida ay uga qeybgali karaan doorashada? Dhalinyarada Xudur oo aad ula dhacsan macluumaadka ku saabsan doorashooyinka ayaa waxay suaalo ku aadan arrimaha doorashooyinka weydiiyeen Gudoomiyaha Guddiga Xaliimo Yareey.
Lataliyaha GMDQ dhinaca aqoonta Cabdirisaq Bashiir ayaa sidoo kale wuxuu u sharxey dhalinyarada Xudur doorasho waxay tahay iyo sideeda tiir oo ay leedahay Doorashada, kadibna waxaa lagu soo gabagabeeyey kulanka ra’yiga ay ka qabaan dhalinyarada inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah waxay ka qabaan.
wafdigii ka socday GMDQ waxay aad ula yaabeen sida ay ugu baahan yihiin reer xudur doorashadaas iyo heerka fahamkooda doorashada uu u sareeyo, dhalinyarada oo codsatay in sida ugu suurta galka badan in uu GMDQ uu ku xaqiijiyo hadafkaas ay ku wada jirto danta dalka iyo dadka.
Waxaa la faafiyey December 19, 2017